Disc amabhuleki for bike mountain: ngobuhle nangobubi bawo
Disc ukubopha is a indlela ehlanganisa disc eqondile pads. Avame esetshenziswa ibhayisikili, kusukela ukusetshenziswa kwabo kungandisa ukuphepha nokusebenza imoto. Nokho, akumelwe sikhohlwe ukuthi uhlelo ukubopha, ehlanganisa kubo, asinakuyethemba njalo:-ke kungase kubabangele ezinye zezingozi. Kodwa Kungashiwo okufanayo mayelana nanoma iyiphi enye.
Yiqiniso, amabhuleki disc ezifakiwe kunoma iyiphi inhlobo ezokuthutha ezinamasondo. Bakhandwa lokuqala asetshenziswe izithuthuthu, kodwa njengoba sokusiza zonke izindawo kwesicelo sabo kunzima, yilesi sihloko sigxila kuphela ngesithuthuthu.
Ngakho, ukuqala, mhlawumbe, kufanele kube incazelo enemininingwane uhlelo unyathela amabhuleki ka lo mshini wezenzo kule uhlobo ezokuthutha. Njengoba sekushiwo ekuqaleni, izingxenye zalo eziyinhloko amasondo steel, exhunywe isondo ihabhu e kwesokunxele ingxenye, eduze kwe-spokes. Futhi sicindezelwe pads, ukugxisha futhi okubangela libhayisikili ukuyeka lapho unyathela amabhuleki. Amandla idluliselwa ngekhebuli ekhethekile.
Nokho, ngenxa yokuthi uhlelo lusebenza uhlobo lokukhanda. Kodwa wokubacindezela disc amabhuleki ukusebenza kancane ehlukile. Zisekelwe izingxenye olufanayo, kodwa wanezela nesinye umugqa pads liquid ekhethekile ehlukanisa disc kusukela pad. Lapho amandla unyathela amabhuleki isetshenziswa ketshezi kakade. Ngaphezu kwalokho, ihamba pad pads ukuthi ngomusa cindezela disk ngaphandle ukusula ke.
Ngakho, wokubacindezela unyathela amabhuleki uhlelo ithuthuke kakhulu ukwedlula lokukhanda.
Kodwa ake sixoxe umlando okuvela amadiski empilweni nabagibeli. Njengoba kushiwo ngenhla, ekuqaleni base efakwe kuphela nokungalawuleki. Ngakho-ke, intaba emabhayisikili ne disc amabhuleki wabonakala ngesikhathi lapho livele umdlalo othile omusha futhi kuyingozi kakhulu - ekwehleni, okuyinto emthambekeni kakhulu kusukela emithambekeni emaweni. Ngemva kokuhlaziya izinzuzo eziningi, yayisetshenziswa futhi abalandeli ngebhayisikili ethulile.
Kodwa disc amabhuleki ibingakaziwa ngokuphelele, ngoba kube nezinzuzo zako kanye nobubi obuthile. Futhi ngenxa yokuthi abantu ukuthenga ibhayisikili entabeni, kufanele unqume, beyidinga noma cha.
1. Njengoba phakathi izicathulo ukubopha futhi isikhala khulula, umoya ujikeleze ngokukhululekile, futhi lokhu kunciphisa Ukushisa kwe-disc.
2. Ziyakwazi Azikho izimo zezulu: imvula nokungcola kusuka endleleni cishe ningaweli kuwo iyehlisa bafake.
3. braking kuphumelela kangcono kunezinye izinhlobo izinhlelo ezifanayo.
4. usebe isondo is hhayi ukufuthelana at kokwehla kancane, ngeke ezilimele ngesikhathi aqondisa ahlukahlukene.
5. Ngisho noma sinqamukile a-abarimi, disc amabhuleki ngeke ziyeke ukusebenza.
6. Ziyakwazi okuhlala.
7. Abakwazi abeke yisiphi isondo.
8. Bona ukuhlobisa ibhayisikili.
Nokho, kukhona disc amabhuleki kanye nebubi. Ngakho, abasakwazi eqolo futhi inesisindo okuningi, kunzima kakhulu ukulungisa, kanye pads kufakwe nobunzima. Ngaphezu kwalokho, izinsimbi zayo kanzima ngokwanele ukuthola, futhi zidinga izinaliti akhethekile isiqu, namafutha okuyinto eseke phezu amabhuleki, ukukhubaza nabo.
Ibhayisikili Dvuhpodvesny: osoboennosti obusebenzayo
American M16 umshini: Ukucaciswa, ukuqhathanisa nesincintisana
Catherine Molohovskaya - actress kusukela "Uni" (Varya)
Egypt ngo-Okthoba: sezulu kanye namanani
Ingcindezi evamile ingu-140 kuya ku-90.
Tolyatti Libhala: amakheli, izincazelo, amamenyu
Umfundisi omuhle weMathematics: Indlela Okungafanele Iphikiswe Ngokhetho